Maxaa ka soo baxay shirkii madaxda sirdoonka Mareykanka iyo madaxweynaha la doortay? - BBC News Somali
Maxaa ka soo baxay shirkii madaxda sirdoonka Mareykanka iyo madaxweynaha la doortay?
Saraakiisha sirdoonka waddanka Mareykanka ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Putin inuu shakhsiyan amray in Ruushku uu qaado weerar dhanka internetka ah, si uu saameyn ugu yeesho natiijada doorashada madaxtinimada oo ay guushuna ku raacdo Donald Trump.
Warbixin la barax tiray ayaa sheegaysa in Moscow ay u dhaqaaqday inay waxyeelayso kalsoonida lagu qabi karo hannaanka dimuqraadiyadda Mareykanka, iyo inay dhulka la gasho sumcadda Hillary Clinton oo ay loolamayeen Mr Trump.
Goor sii horreysayna madaxda sirdoonka Mareykanka iyo madaxweynaha la doortay ayaa markii ugu horreysay ka wadahadlay eedaha Ruushka loo soo jeedinayo.
Haddaba arrimahan ugu dambeeyay ayaa waxaannu ka wareysanay Dr Cabdullaahi Xaashi Abiib, oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo deggan dalka Mareykanka, Cabdifitaax Ibraahim Cagayare oo wareystay ayaa marka hore waxa uu waydiiyay waxa ay la tahay inay ka soo baxeen shirkii ay yeesheen Trump iyo madaxda sirdoonka Mareykanka?
Maqal Oday 83 jir ah oo nooga warramay isbeddelka dhaqan ee ku yimid Soomaalida
Oday 83 jir ah oo nooga warramay isbeddelka dhaqan ee ku yimid Soomaalida
Maqal Urur ka dhisan magaalada Godey oo ragga ku wacyigaliyo ka qeyb qaadashada howlaha guriga
Urur ka dhisan magaalada Godey oo ragga ku wacyigaliyo ka qeyb qaadashada howlaha guriga